အခုကာလအနုပညာအလုပ်တွေကလဲမဖြစ်တော့ စားဝတ်နေရေးအတွက်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းလေးစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ရတဲ့ အစ္စဏီအကြောင်း – Bagan Thar
အစ္စဏီက အဆိုတော်ကောင်းတစ်ယောက်ပါ။ယခင်ကနေခုချိန်ထိ သူရဲ့သီချင်းတွေကကျော်ကြားနေဆဲဖစ်ပါတယ်။သူရဲ့အမှားတစ်ခုကြောင့်ထောင်ကြခဲ့ပါတယ်။လတ်တလောလေးကမှ ထောင်ကလွတ်လာတာပါအခုဆိုသူကဘဝကိုအကောင်းဆုံဖြတ်သန်းနေပါပြီ။သူအထဲမှာနေခဲ့ရတုန်းက သူ့မိခင်မှာအမြဲနာကျင်ဝမ်းနည်းနေခဲ့ရတာပါ။သားအမိနှစ်ယောက်ထဲဆိုတော့ပိုခံစားရမှာပါ။
ခုဆိုသူက မိခင်နဲ့အတူအလုပ်ဝိုင်းကူလုပ်ရင်းဘဝကိုဖြတ်သန်းနေပါတယ်။သူက အလှူအတန်းတွေမှာလဲရက်ရောတဲ့စိတ်ရှိကြောင်း Mideaတစ်မှာ “အမှားတစ်ခုလုပ်မိလို့ခုလိုဖြစ်ရပေမယ့် လူထဲကလူပါပဲ အလှူအတန်းတွေလဲတတ်နိုင်သလောက်လုပ်သွားချင်တာပေါ့”ဆိုပြီးပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်
အစ္စဏီကအခုသားအမိနှစ်ယောက်စီးပွားရေးကိုစတင်လုပ်ကိုင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလဲ ရှင်းပြထားပါသေးတယ်။ “ကျွန်တော်အမေ က ဟင်းချက် အရမ်းကောင်းတယ် အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ သားအမိ ၂ယောက် စီးပွားရေး လုပ်မှာ ဖြစ်တော့ မှာမို့လို့ မေကြီးလက်ရာ ဆိုပြီး စီးပွားရေး တစ်ခု ကိုစလုပ်ခဲ့တာပါကျွန်တော် အထဲ မှာတုန်းက အမေ ရဲ့ ဟင်းချက်လက်ရာ ကို အရမ်းလွမ်းတယ်. အမေ ဟင်းချက် ပို့တဲ့နေ့ဆို ပို့တဲ့ဟင်းတွေကိုတစ်နေ့တည်း ကုန်အောင်စားပစ်တာမျိူးရှိတယ် ပရိသတ်တွေက မေကြီးလက်ရာ ကို အားပေးချင်တယ်ဆိုရင် မေကြီးလက်ရာ fb မှာ အားပေးနိုင်ပါတယ်”ဆိုတဲ့သတင်းကိုမျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။
အစၥဏီက အဆိုေတာ္ေကာင္းတစ္ေယာက္ပါ။ယခင္ကေနခုခ်ိန္ထိ သူရဲ႕သီခ်င္းေတြကေက်ာ္ၾကားေနဆဲဖစ္ပါတယ္။သူရဲ႕အမွားတစ္ခုေၾကာင့္ေထာင္ၾကခဲ့ပါတယ္။လတ္တေလာေလးကမွ ေထာင္ကလြတ္လာတာပါအခုဆိုသူကဘဝကိုအေကာင္းဆုံျဖတ္သန္းေနပါၿပီ။သူအထဲမွာေနခဲ့ရတုန္းက သူ႕မိခင္မွာအၿမဲနာက်င္ဝမ္းနည္းေနခဲ့ရတာပါ။
ခုဆိုသူက မိခင္နဲ႕အတူအလုပ္ေဝဝိုင္းကူလုပ္ရင္းဘဝကိုျဖတ္သန္းေနပါတယ္။သူက အလႉအတန္းေတြမွာလဲရက္ေရာတဲ့စိတ္ရွိေၾကာင္း Mideaတစ္မွာ “အမွားတစ္ခုလုပ္မိလို႔ခုလိုျဖစ္ရေပမယ့္ လူထဲကလူပါပဲ အလႉအတန္းေတြလဲတတ္နိုင္သေလာက္လုပ္သြားခ်င္တာေပါ့”ဆိုၿပီးေျပာထားတာေတြ႕ရပါတယ္
ကြၽန္ေတာ္ အထဲ မွာတုန္းက အေမ ရဲ႕ ဟင္းခ်က္လက္ရာ ကို အရမ္းလြမ္းတယ္. အေမ ဟင္းခ်က္ ပို႔တဲ့ေန႕ဆို ပို႔တဲ့ဟင္းေတြကိုတစ္ေန႕တည္း ကုန္ေအာင္စားပစ္တာမ်ိဴးရွိတယ္ပရိသတ္ေတြက ေမႀကီးလက္ရာ ကို အားေပးခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေမႀကီးလက္ရာ fb မွာ အားေပးနိုင္ပါတယ္”ဆိုတဲ့သတင္းကိုမွ်ေဝေပးလိုက္ရပါတယ္ေနာ္။